Itoobiya iyo maamulka Somalilland oo ka wada hadlay xiriir ganacsi & maalgashi – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Itoobiya iyo maamulka Somalilland oo ka wada hadlay xiriir ganacsi & maalgashi
Addis Ababa – Mareeg.com: Dowladda Federaalka Itoobiya iyo maamulka Somalilnad ayaa ka wada hadlay xiriir ganacsi iyo maalgashi oo labada dhinac dhex mara kadib kulan magaalada Addis Ababa ku dhexe maraya ra’iisal-wasaare-ku-xigeenka Itoobiya, ahna wasiirka arrimaha dibedda Dr. Tedros Adhanon iyo wasiirka arrimaha debadda maamulka Somaliland Maxamed Biixi Yoonis.
Sida lagu baahiyey wakaaladda waararka ee Fanabc.com (Fana Broadcasting Corporate), Ra’iisal-wasaare-ku-xigeenka oo magaalada Addis Ababa kulan muddo dheer qaatay kula yeeshay Wasiirka Arrimaha Dibedda Somaliland Maxamed Biixi Yoonis, ayaa sheegay inay ka wadahadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka ganacsi iyo maalgashi ee u dhexeeya Somaliland iyo Itoobiya.
“Labada dhinac waa inay sidii wadaan xidhoodhkooda si sare loogu sii wado iskaashiga horumarinta ee dhinacyada ganacsiga iyo maalgashiga,” ayuu yiri Wasiirka Khaarajiga, ahna Ra’iisal-wasaare-ku-xigeenka Itoobiya Dr. Tedros Adhanon.
Wasiirka Arrimaha Dibedda maamulka Somaliland, Maxamed Biixi Yoonis, ayaa isaguna kulankaas ka caddeeyey inay ka shaqayn doonaan sidii loo sii wadi lahaa nabadgelyadda iyo ammaanka mandaqada Geeska Afrika, isagoo ka xog-waramay xiriirka u dhexeeya Somaliland iyo Itoobiya oo doonaya iney xoojiyaan ganacsi iyo maalgashiga u dhexeeya.
Itoobiya ayaa xafiis ganacsi ku leh magaalada Hargeysa ee xarrunta maamulka Somaliland, waxaana sidoo kale labada dhinac ka dhaxeeya xiriir iyo wada shaqeyna arrimaha amaanka ah, maadaama ay leeyihi xuduud.